Ch 18 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 18 Matthew
18:1 Ary tamin'izany ora izany, ny mpianany nanatona an'i Jesosy, nanao hoe:, "Iza no mihevitra ny ho lehibe kokoa ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?"
18:2 Ary Jesosy, miantso ny tenany ho zazakely, nametraka azy teo afovoany.
18:3 Ary hoy izy:: "Amen Lazaiko aminareo, raha tsy miova ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra.
18:4 Noho izany, na iza na iza no efa nanetry tena tahaka ity zazakely ity,, izany olona izany dia lehibe kokoa ao amin'ny fanjakan 'ny lanitra.
18:5 Ary na zovy na zovy no manaiky zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, mandray ahy.
18:7 Woe to a world that leads people astray! Although it is necessary for temptations to arise, kanefa: Woe to that man through whom temptation arises!
18:8 So if your hand or your foot leads you to sin, dia tapaho ka ario lavitra anao. It is better for you to enter into life disabled or lame, than to be sent into eternal fire having two hands or two feet.
18:9 And if your eye leads you to sin, hamongotra hiala izy, ka ario ho afaka aminao. It is better for you to enter into life with one eye, than to be sent into the fires of Hell having two eyes.
18:10 Tandremo sao tsy tsinontsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny. Fa lazaiko aminareo, fa ny anjely any an-danitra hijery mandrakariva ny tavan'ny Raiko, Izay any an-danitra.
18:12 Ahoana no toa anao? Raha misy olona manana ondry zato, Ary raha ny iray tamin'izy ireo efa nania, tokony dia tsy mandao ny sivy amby sivi-folo eny an-tendrombohitra, ary mankanesa any an hitady izay efa nania?
18:13 Ary raha tokony hitranga mba hahitana azy: Amen Lazaiko aminareo, fa manana fifaliana bebe kokoa noho ny iray, noho ny sivy amby sivi-folo, izay tsy nandeha lalan-diso.
18:14 Na izany aza, izany, dia tsy sitraky eo anatrehan'ny Rainareo, Izay any an-danitra, fa ny iray amin'ireny madinika ireny dia tokony ho very.
18:15 Fa raha ny rahalahinao izay nanota taminao, handeha nanitsy azy, eo aminao ary Izy irery ihany. Raha mihaino anao izy, dia efa indray ny rahalahinao.
18:16 Fa raha tsy hihaino anao, manasa aminao olona iray na roa, mba hahazoanareo mijoro ny teny rehetra, araka ny tenin'ny vavolombelona roa na telo.
18:17 Ary raha tsy mety mihaino azy, lazao amin'ny Fiangonana. Fa raha tsy mihaino ny Fiangonana, aoka izy ho tianao ny mpanompo sampy sy ny mpamory hetra,.
18:18 Amen Lazaiko aminareo, na inona na inona no efa voafehy eto an-tany, dia ho voafehy koa any an-danitra, ary na inona na inona no efa navoaka eto an-tany, dia ho afaka ihany koa ny any an-danitra.
18:19 Ary lazaiko aminareo, Raha misy roa izay rehetra eo aminareo efa nifanaiky eto an-tany, momba ny zavatra na inona na inona fa efa nangataka, dia ho azony avy amin'ny Raiko, Izay any an-danitra.
18:20 Fa na aiza na aiza roa na telo mivory amin'ny anarako, any aho, eo aminy. "
18:21 Ary Petera, manakaiky azy, nanao hoe:: "Tompo ô, impiry no hanotan'ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Na impito?"
18:22 Fa hoy Jesosy taminy: "Izaho tsy milaza aminareo, impito, fa na dia impito amby fitopolo heny.
18:23 Noho izany, ny fanjakan'ny lanitra dia oharina amin'ny lehilahy izay mpanjaka, izay te-hidinika amin'ny mpanompony.
18:24 Ary rehefa nanomboka naka kaonty, dia nisy anankiray nentina ho any aminy, izay nitrosa talenta iray alina azy.
18:25 Fa satria tsy misy fomba handoa izany, ny tompony nandidy azy mba hamidy, niaraka tamin'ny vady aman-janany, ary izay rehetra nananany, mba hamaly izany.
18:26 Fa izany mpanompo, lavo niankohoka, niangavy azy, nanao hoe:, 'Manana faharetana amiko, ary izaho no handoa izany ho anareo rehetra. '
18:27 Ary ny tompon'izany mpanompo, satria nangoraka, nalefany, ary dia namela ny trosany.
18:28 Fa raha izany mpanompo izany lasa, dia nahita iray tamin'ireo mpanompo namany izay nitrosa denaria zato. Ary mihazona azy, dia nangeja azy, nanao hoe:: 'Valio izay tokony ho.'
18:29 Ary ny mpanompo namany, lavo niankohoka, nangataka azy, nanao hoe:: 'Manana faharetana amiko, ary izaho no handoa izany ho anareo rehetra. '
18:30 Nefa izy tsy vonona. Fa tsy, dia nivoaka izy ka efa nalefa tany am-ponja azy, mandra-izy fa hamaly ny trosa.
18:31 Ary ny mpanompo namany, raha nahita izay zavatra tonga teo, Nalahelo mafy ny, ary dia lasa izy ka nilaza ny tompony izany rehetra natao izany.
18:32 Dia nampanalain'ny tompony niantso azy, ka hoy izy taminy:: 'Ianareo mpanompo ratsy fanahy, Efa nafoiko ny trosa rehetra, satria niangavy tamiko.
18:33 Noho izany, koa ianao no tsy tokony ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao, fotsiny tahaka ny onena anao?'
18:34 Ary ny tompony, rehefa tezitra, nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly, mandra-trosa namaly manontolo.
18:35 Noho izany, koa, dia ny any an-danitra hataony aminareo, raha toa ka ny tsirairay avy dia tsy hamela ny rahalahiny amin'ny fonareo avy ianareo. "